कपिलवस्तुमा विप्लव नेकपा विरुद्ध प्रहरी अप्रेशन, एक घाईते, दुई हतियार बरामद ! – ebaglung.com
२०७५ फाल्गुन २३, बिहीबार १५:३०	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
प्रेम सुनार, बुटवल २०७५ फागुन २३ । कविलवस्तु प्रहरीले विहीवार विहान देखि विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता विरुद्ध अप्रेशन सुरु गरेको छ । त्यस क्रममा एक एक थान पेस्तोल , एसएमजी र त्यसको गोली लगायतका युृद्ध सामग्री प्रहरीले उनिहरुबाट वरामद गरेको छ ।
त्यस क्रममा सो पार्टीले भूमिगत रुपमा आधारभुत शैन्य तालिम शिविर सञ्चालन गरको सुराक समेत प्रहरीले पाएको छ । जिल्लाको शिवराज नगरपालिका–९ वडा एरियामा विप्लव समुहका कार्यकर्ताहरु लुकीछिपी बसेका छन भन्ने सुचना पाउन साथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ईलाका प्रहरी कार्यालय सुन्दरीडाँडाबाट संयुक्त रुपमा खटिएको प्रहरी टोलीले सोही वडाको अञ्चलपुर निवासी ४० बर्षिय दुर्गाबहादुर रोक्काको घरमा खानतलासी गरेको थियो । त्यस क्रममा रोक्का र उनका साथी भागेको र प्रहरीले उनिहरुलाई पक्राउ गर्नका लागि साँप्रा र घुँडा माथी गोली हानी घाईते बनाएर पक्राउ गरेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ ।
अप्रेशन अहिले पनि जारी रहेको बताउँदै विप्लव नेतृत्वको पार्टीले जंगलमा शैन्य तालिम शिविर राखेको ब्यानर फेला पारेकोले उक्त शिविर पनि पत्ता लागाउनु पनि भयो कि ? भन्ने जिज्ञासामा रावालले अहिले नै सबै कुरा भन्न नमिल्ने प्रतिकृया दिए ।
विप्लवका कार्यकर्ताबाट ५४ टाईप पेस्तोल थान–१, त्यसको म्यागजिन थान–१ र ३ राउण्ड गोली, एसएमजी २ थान, त्यसको ६८ राउड गोली, म्यागजिन ३ थान , ५.५६ क्यालिभरको राउण्ड मात्र १ सय ३० पिस, थप १ थान म्यागजिन , विभिन्न किसिमका तार र फलामका नटहरु २५ किलो तौलको एक बोरा र माक्र्सवाद लेनिनवाद माओवादी जिन्दावाद , ‘जनमुक्ति सेना नेपाल आधारभुत सैन्य तालिम शिविर २ नम्वर कम्पनी’ लेखिएको ब्यानर १० थान वरामद गरेको छ । यसबाट सो पार्टीले शैन्य तालिम दिई रहेको छ भन्ने प्रहरीको बुझाई छ ।